Somali News 06.08.21 (Evening) | KWIT
Waaxda Caafimaadka Degmada Dakota waxay balamaha ka qaadeysaa rugaha talaalka COVID-19. Waxaa loo qorsheeyay Arbaco kasta. Labadaba Moderna iyo hal-dose Johnson iyo Johnson ayaa la heli doonaa. Wac (402) 987-2164 wixii macluumaad dheeraad ah.
Magaalada Sioux City ayaa ku dhawaaqday qorshooyinka sanadkaan Mardi Gras Parade. Dhacdadan ayaa la joojiyay sanadkii hore COVID-19 dartii. Bandhig-faneedku wuxuu bilaabmayaa Sabtida Fagaaraha Beerta Khamiista, Julaay 1deeda 6 pm. magaalada Sioux City.
Sabtida Beerta ayaa ka dhici doonta laba maalmood, Jimce, July 2 iyo Sabtida, July 3. Qabanqaabiyeyaasha xafladda muusikada bilaashka ah ayaa bixiyay cusbooneysiin maanta. Labada nin ee hip hop-ka “D.A.D.” (aabe) wuxuu ka mid noqon doonaa fanaaniinta faraha badan ee jilay Abe Stage. Falalka kale ee ka socda masraxa ugu weyn waxaa ka mid ah Sioux City’s Ultra Violet Fever iyo Ghost Cat. Qaar ka mid ah waxqabadka qaranka waa CTA ama Hay'adda Transit California, Valorie June, iyo Trombone Shorty. Madaxa cinwaanka habeenka jimcaha waa AJR iyo habeenka sabtida John Fogerty.
Go'aannada kama dambaysta ah ee tirada dadka iyo waxyaabaha waji-xidhka looga baahan yahay ayaa la samayn doonaa wakhti dambe.